မီနာမီနို အန်ဖီးလ်ကို အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိလာဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ လီဗာပူး ရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်းများ - Sports Myanmar
ဆဲလ်ဘု အသင်းရဲ့ အသက် 24 နှစ် အရွယ် ဂျပန် ကွင်းလယ် ကစားသမား မီနာမီနို ဟာ ဒီကနေ့မှာပဲ လီဗာပူး နဲ့ ဆေးစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်တဲ့ ဇန်နဝါရီ 1 ရက် နေ့မှာ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ တရားဝင် ကစားသမား ဖြစ်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဖီး ကလပ်ဟာ မီနာမီနို လို ကစားသမားမျိုး ရဖို့ အပြောင်းအရွှေ့ အသုံးစာရိတ် ပေါင် 7.25 သန်း သာ သုံးစွဲလိုက်ရပြီး ၊5နှစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ နည်းပြကြီး ယာဂန် ကလော့ပ်ဟာ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှာ ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ စည်းကမ်းတွေ ၊ Tempo မြင့်လွန်းတဲ့ ကစားဟန်တွေကြောင့် ၊ ကစားသမားတစ်ယောက်ဟာ ဇန်နဝါရီ ကာလမှ ရောက်လာပြီး အသင်းနဲ့ အံ့ဝင်အောင် ကစားပြဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းလွန်းတယ်လို့ သူက ခံယူထားသူပါ။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ဇန်နဝါရီ ကာလမှာပဲ ဂရူဂျစ် ကို ပထမဆုံး ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် အငှားပြန်ချလိုက်သလို ၊ ခံစစ်ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေ များစွာကြုံနေရလို့ စတီဗင် ကော်ကာ ကို အရေးပေါ် ခေါ်ယူခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဗန်ဒိုက် ကတော့ ဆောက်သမ်တန် အသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ထံ တိုင်ကြားခဲ့လို့ နောက်ထပ် စောင့်ဆိုင်းလိုက်ရတာ ဖြစ်ကာ ၊ ဇန်နဝါရီ ရောက်မှ ချက်ခြင်း ခေါ်ယူခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီလို သာဓကပေါင်း များစွာနဲ့ ခွဲထွက်ပြီး ၊ မီနာမီနို ကို ကြားကာလကြီးမှာ အလျှင်အမြန် ခေါ်ယူလိုက်ရတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိလို့နေပါတယ်။ ကစားသမား ရဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းခွင့်လျော်ကြေး ပေါင် 7.25 သန်း ဆိုတာ လီဗာပူး အလို ကလပ်အတွက် အလကားနီးပါး ရလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ အသင်းမှာ ရှိတဲ့ ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ မီနာမီနို ရဲ့ တန်ဖိုးကို အနည်းဆုံး ပေါင် 25 သန်း အထိတောင် သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။
Liverpool’s Brazilian midfielder Roberto Firmino (C) celebrates with teammates after scoring their first goal during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 3, 2019. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
ဒါ့ကြောင့် အခြား ဥရောပ ကလပ်တွေ မလှုပ်ရှားမီ လက်ဦးမှှု ရယူကာ ခေါ်ယူသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အေစီမီလန် အသင်း အပါအဝင် ၊ ဘွန်ဒက်လီဂါ ကလပ် တစ်ချို့က လီဗာပူုး နဲ့ ဆဲလ်ဘုတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကို လာရောက်ကာ ဂျပန်ကွင်းလယ် ကစားသမားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အနီးကပ် လေ့လာခဲ့ကြပါသေးတယ်။ သို့သော် အဲဒီအချိန်မှာ လူမသိ သူမသိ ခြေတစ်လှမ်းသာနေတာက လီဗာပူး ရဲ့ အားကစား ဒါရိုတ်တာ မိုက်ကယ် အက်ဒ်ဝပ်ပါ။
မီနာမီနို ကို အိုဆာကာ အသင်းမှာ ဒီယေဂို ဖော်လန် နဲ့ အတူ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်နဲ့ တွဲကစားနေစဉ် ကတည်းက သူ့ရဲ့ Scout List မှာ ထည့်သွင်းထားခဲ့ပြီး၊ ဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာတော့ အနီးကပ် လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ကာ ပြိုင်ဘက်တွေ အားလုံးထက် နှာတစ်ဖျားသာအောင် လှုပ်ရှားပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိုက်ကယ် အက်ဒ်ဝပ် နဲ့ ဆဲလ်ဘု အားကစား ဒါရိုတ်တာ တို့အကြား ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကလဲ အပြောင်းအရွှေ့ကို အလျှင်အမြန် ရုပ်လုံးပေါ်လာစေဖို့ အထောက်အပံ့တွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
Liverpool’s Brazilian midfielder Roberto Firmino (C) vies for the ball with Chelsea’s Spanish defender Cesar Azpilicueta and Chelsea’s Spanish goalkeeper Kepa Arrizabalaga (R) during the UEFA Super Cup 2019 football match between FC Liverpool and FC Chelsea at Besiktas Park Stadium in Istanbul on August 14, 2019. (Photo by Bulent Kilic / AFP)
ဆဲလ်ဘု အသင်းရဲ့ အားကစား ဒါရိုတ်တာ Christoph Freund က သူ့ အသင်းက ကစားသမား တစ်ယောက်ကို လီဗာပူးလို အသင်းမျိုးက လိုလိုချင်ချင် နဲ့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တာ ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာကြည့်ရင် ၊ လီဗာပူုးဟာ မီနာမီနို ကို ဈေးချိုချို နဲ့ သိမ်းပိုက်ဖို့ တော်တော်လေးကို လမ်းကြောင်းဖြောင့်ဖြူးခဲ့တာ မှန်းကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲအပြီးမှာ လီဗာပူုး နည်းပြ ကလော့ပ် ကိုယ်တိုင်လဲ ဆဲလ်ဘုနည်းပြ ဂျဆီ မာ့ရှ် ကို “ မင်းက ဆဲလ်ဘုမှာ နေရင်း ထိပ်တန်း ကစားသမားတွေကို အရောင်တင်ပေးနေတာပဲ” လို့ ချီးကျူး စကားဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ သြစတီးယား ကနေ လီဗာပူး ကို ပြန်လာခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆင် နဲ့ လက်ထောက် အသင်းခေါင်းဆောင် မေလ်နာ တို့ အပါအဝင် ၊ စီနီယာ ကစားသမား အများစုက မီနာမီနို ဟာ လီဗာပူး နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ကစားသမား တစ်ယောက်လို့ ချီးကျူးလာခဲ့သလို ၊ အသင်းအတွက် ခေါ်ယူပေးဖို့လဲ တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့တောင် သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။
တကယ်တော့ မိုက်ကယ် အက်ဒ်ဝပ်ဟာ ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်ကနေ ဘယ်သူမှ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါပြီ။
မီနာမီနိုဟာ ဆဲလ်ဘု အတွက် စုစုပေါင်း 199 ပွဲ ကစားပေးထားပြီး ၊ 64 ဂိုး သွင်းယူကာ 44 ကြိမ် ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းဖလား4ကြိမ် နဲ့ အမှတ်ပေး ဖလား5ကြိမ် အထိလဲ သိမ်းပိုက် ရယူထားခဲ့ပြီးပါပြီ။
သြစတီးယား ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူ တွမ် မစ်ဒါ ကတော့ လီဗာပူး အနေနဲ့ မီနာမီနို ကို ခေါ်ယူတာ ဘာမှ ဆုံးရှုံးစရာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပြီး ၊ အသင်းမှာလဲ သေချာပေါက် အံဝင်အောင် ကစားပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အခုလို သုံးသပ်ပြသွားခဲ့ ပါတယ်။
“ ဒီရာသီမှာ လူတိုင်းက ဟာလန်း ရဲ့ အကြောင်းပဲ ပြောနေကြတာပါ ဒါပေမယ့် မီနာမီနို ကတော့ အတွေ့အကြုံပိုင်းက နောက်တစ်ဆင့်ကိုတောင် ရောက်နေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက နည်းပြ မာ့ရှ် အသင်းကို တာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်း သူဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး အရေးပါတဲ့ ကစားသမး ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘောလုံးကို Dribble လုပ်နိုင်တယ် ၊ နေရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေ မှာ ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်တယ် ၊ ဂိုးဖန်တီးနိုင်တယ် ၊ လုပ်အားနှုန်းကလဲ အရမ်းကောင်းတယ်လေ။ အဆုံးသတ်ပိုင်းမှာ ဒီထက်ပိုကောင်းလာရင် သူဟာ ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ၊ ဂျန့် တို့နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဂိုးတွေ သွင်းပြခဲ့သလို ၊ ပြိုင်ဘက် ခံစစ်မူးတွေကိုလဲ ဖိအားပေး ကစားနိုင်တယ်လေ။ နောက်ဆုံး ပြောရရင် ဆဲလ်ဘု ဆိုတာ ၊ သြစတီယား ရဲ့ လီဗာပူး လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ကစားပုံ ၊ ကစားဟန် က အစ တူညီစွာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အသင်းမို့ မီနာမီနို ဟာ အန်ဖီးမှာ အံဝင် ဂွင်ကျ ဖြစ်အောင် သေချာပေါက် ကစားပြပါလိမ့်မယ်” လို့ သုံးသပ်ပြသွားခဲ့ ပါတယ်။
လီဗာပူး နဲ့ နီးစပ်သူတွေ ကတော့ သူတို့အသင်းဟာ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်နဲ့ မီနာမီနို ကို ခေါ်ယူခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ ၊ ကွင်းအတွင်းက စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကြောင့်သာ ခေါ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖြေရှင်းထားပေမယ့် ၊ မီနာမီနို ကြောင့် လီဗာပူး ရဲ့ ဂျပန် ဈေးကွက်ဟာ တစ်ဟုန်ထိုး ထိုးတက်လာမှာ သေချာနေပါတယ်။
လက်ရှိမှာ မိုဆာလတ် ကြောင့် လီဗာပူူး ရဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဈေးကွက်က အရမ်းကို အားကောင်းလျှက် ရှိနေပါပြီ။
ဂျပန် သတင်းထောက် ဟိုင်ဒို တာမာရူ ကတော့ မီနာမီနို ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဟာ လီဗာပူး အတွက် အကျိုးရှိမှာတင် မဟုတ်ပဲ ၊ ကစားသမား အနေနဲ့လဲ နိုင်ငံရဲ့ ပြယုဂ် ကစားသမား ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အခုလို မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
“ မီနာမီနို ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းနဲ့တင် ဒီမှာ အရမ်းကို လှုပ်ခတ်နေပါပြီ။ အခုပြောင်းမယ့် အသင်းက လက်စတာ ၊ ဆောက်သမ်တန် တို့လို အသင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး ။ လီဗာပူး ပါ။
ဒါကြောင့် ကာဂါဝါ ယူနိုက်တက် ကို ပြောင်းရွှေ့တုန်းကလို ဖြစ်ဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
မီနာမီနို က တစ်ဖြေးဖြေး နဲ့ အမြင့်ကို တက်လှမ်းနေတဲ့ ဘောလုံးသမားဗျ။ ဒီရာသီ မစတင်ခင် အချိန်ကတော့ သူဟာ ဆဲလ်ဘုရဲ့ အဓိက အကျဆုံး ကစားသမား မဟုတ်သေးပါဘူး။ အခုတော့ အများကြီးကို တိုးတက်လာနေပါပြီ။
သူဟာ ဂျပန်မှာ ကာဂါဝါ ၊ ဟွန်ဒါ တို့လို ပရိသတ်များတဲ့ သူ မဖြစ်သေးပါဘူး။ သြစတီးယား လိဂ် ဘောလုံးပွဲတွေကလဲ TV မှာ မပြဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူး ကို ပြောင်းသွားရင်တော့ သူ့မှာ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ ။ လီဗာပူး ရဲ့ အာရှဈေးကွက်လဲ ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်လာမယ် ထင်ပါတယ်” လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှ မီနာမီနို ကို အရ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါက ၊ အသင်းမှာ ရှိတဲ့ လူငယ် ကစားသမားလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘရူစတာ ၊ ကာတစ်ဂျုံး တို့တို ဒုတိယ ရာသီဝက်မှာ အငှားချသွားဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူလိုက်တိုင်း ရွှေဖြစ်သွားလေ့ရှိတဲ့ ကလော့ပ် နဲ့ အက်ဒ်ဝပ် တို့ရဲ့ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကတော့ ၊ အပြောင်းအရွှေ့ ပမာဏ တန်ဖိုး နည်းတာနဲ့တင် ပရိသတ်တိုင်းက ဝိုင်းဝန်းချီးကျူး လက်ခုပ်တီးနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်…………..